Giraffe Drywall Sander Manufacturers , Suppliers - China Giraffe Drywall Sander Factory
Umthengisi wezixhobo zamandla zobuchwephesha
Indlulamthi Drywall Sander
I-Foldable Drywall Sander
I-Ningbo Yushen Trading Co.,Ltd. yasekwa ngo-2014, umboneleli odlamkileyo wezixhobo zamandla eTshayina, edibanisa ukwenziwa kunye norhwebo. Iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kwiimarike zaphesheya.
Ubunzima obulula Isiphatho esifutshane E...
I-Drywall yoMbane ephathwa ngesandla...
I-Electric Drywall Sander Ide...
800W 225MM Idrywall yoMbane...
I-LED yoMbane we-Drywall Sander Wall Polisher Umatshini oXhaphazelekayo oguquguqukayo oguquguqukayo - KM2303
Nge-800W (6.5A) i-motor kunye ne-6 isantya sokulungelelaniswa ukusuka kwi-500RPM ukuya kwi-1900RPM. Le Electric Drywall Sander ngokulula ukumelana nodonga, uphahla kunye nekona. Ukutshixa amandla okongeziweyo kunokugcina umatshini kwimeko yokusebenza kunye nokunciphisa ukukhathala ngexesha lokusetyenziswa. Ngaphezulu kwe-90 yohlengahlengiso, iya kuhlangabezana nee-engile zakho ezahlukeneyo zokusebenza.
800W 225MM Electric Drywall Sander nge Sanding Accessories- KM2301
Le sander drywall iza ingxowa yokuqokelela uthuli kunye 6.5 iinyawo bhetyebhetye uthuli vacuum hose. Idizayini yebhola yentsimbi emphethweni ikhululekile, iguquguquka kwaye igcina umsebenzi kunesakhiwo sebrashi yendabuko. Ukusebenzisa ukuqengqeleka endaweni yokutyibilika kunokunciphisa kakhulu ukukhuhlana.
I-LED eSongekayo yoMbane we-Drywall Sander eneVacuum Attachment- KM2304
Le sander ye-drywall enemisebenzi emininzi isetyenziselwa ukugalela iindonga ezomileyo kunye neesilingi, ezinokugudisa iindonga ngokukhawuleza nangokulula. Intloko ejikelezayo ye-360 ° kunye ne-6 variable variable setting yenza lo matshini wokugaya uguquguquke. Isibambo sinoyilo olunwebekayo nolugotywayo, olunokufikelela ngokulula kubude nokugcina indawo yokugcina. Inkqubo yokuqokelela uthuli lwe-vacuum oluzenzekelayo inokufunxa ngaphezulu kwe-96% yothuli xa isantiya eludongeni. Idityaniswe ne-hose kunye nebhegi yothuli, umphumo ofanelekileyo wokususa uthuli unokufumaneka.
I-Drywall yoMbane yeSander ilungile kwiKhaya le-DIY kunye nokuhombisa- KM2301-A
I-drywall sander yombane ine-6.5A (800W) yamandla, ngaphezu kweesanti ezininzi ze-drywall, inika amandla athembekileyo, aguquguqukayo kwi-sanding pad, kwaye iphakathi kwe-stem inyuselwe ukulinganisa i-14lb yomzimba wobunzima bokukhanya. I-motor yesantya eguquguqukayo isebenza ukusuka kwi-500 ukuya kwi-1800rpm. Wenza umsebenzi ophezulu wenziwe ngokukhawuleza.
© Copyright - 2010-2022 : Onke Amalungelo Agciniwe.